ဖြိုးပြောပြတဲ့ ဂျပန်အကြောင်းအရာ အပိုင်း (၂)!! - JAPO Japanese News
ဖြိုးပြောပြတဲ့ ဂျပန်အကြောင်းအရာ အပိုင်း (၂)!!
ဟူး 04 Mar 2020, 17:23 ညနေ
မင်္ဂလာပါ ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ဖြိုး ဂျပန်မလာခင် ကြုံရတဲ့ experience ရယ် ဘယ်လိုလာခဲ့ရလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြိုးသိသလောက် အကြောင်းအရာတချိူ့ကို sharing လုပ်ပေးပါမယ်နော်။
အထူးသဖြင့် အခုတစ်ခေါက်ကတော့ Engineer နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်လို့ နောက်ဆိုရင်တခြား visa တွေအတွက်လည်း sharing လုပ်ပေးပါမယ်နော်။
ဖြိုးကျောင်းပီးခါစက Singapore သွားဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့် Singapore မှာအလုပ်ရဖို့က မြန်မာပြည်မှာ experience ကောင်းကောင်းရှိမှ အဆင်ပြေမှာဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာအလုပ် experience အကြာကြီးမယူချင်တဲ့ဖြိုးက ဂျပန်စာတက်မယ်ဆိုရင် experience သိပ်မလိုတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကိုမြန်မြန်သွားရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဂျပန်စာကိုစသင်ယူခဲ့ပါတယ်။
အိမ်မက်တွေက လက်တွေ့မှာမလွယ်ပါဘူးနော်။ N4 ပြီးတော့ ယောင်လည်လည်လုပ်နေရင်း Marketing အလုပ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်လ 130000/- နဲ့ သုံးလပြည့်ပြီးတာနဲ့ထွက်ပြီး ဂျပန်စာ N3 ထပ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ Japan IT company မှာတစ်နှစ်လောက် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ IT ပိုင်းလဲသင်ပေး ဂျပန်စာလည်းသင်ပေးတဲ့company ပါ။ အဲ့အတောအတွင်း N2 အောင်သွားပါတယ်။ ကျောင်းပြီးတာ ၂ နှစ်ကြာပြီး ဂျပန်စာလည်းN2အောင်နေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်ရောက်ဖို့မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ Job fairတွေသွားဖြေ၊ Skypeက Interview ဖြေတာတွေ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မပါခဲ့ပါဘူးနော်။
နောက် Engineer တွေကို အလုပ်ရှာပေးတဲ့ ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းတက်ရင်း အလုပ်တဖက်လုပ်ရင်းနဲ့ company interview တွေဖြေရင်းနဲ့မှအခု မြန်မာတွေတော်တော်များများလာကြတဲ့はけんしゃいん（Haken Shain）အနေနဲ့ Interview အောင်ပြီး ဂျပန်မှာအခုလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
ဖြိုးသိသလောက် မြန်မာပြည်မှာ ဂျပန်ကိုပို့ပေးတဲ့ Agency တွေကလည်း မှိုလိုပေါနေပါပြီ။ ပြီးတော့ Engineer တွေအတွက် agency fee ပေးစရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက်လာလို့ရတဲ့နည်းတွေလည်း ပေါပါတယ်နော်။ မလာခင်စုံစမ်းပါ လေ့လာပါ။
ဂျပန်ရောက်ရင် ပြီးတာပဲဆိုပြီး မဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ့။ လစာကိုသေချာမေးပါ တစ်ချိူ့က OTက 60 ဆိုပီး စာချုပ်တွေရှိပါတယ်။ OT 60 ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့နာရီ 60 ကျော်မှ ကိုယ့်အတွက်အချိန်ပိုကြေးရတာပါနော်။
နောက်ပြီး စနေနေ့တွေအလုပ်ဆင်းရပြီး အဲ့အတွက် OT မပေးတဲ့ company တွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ အလုပ်လျှောက်တော့မယ်ဆို လစာရော OT နာရီရောသေချာကြည့်ပါ။ နောက်တစ်ချက်က အိမ်လစာ ပေးလား၊ တစ်ဝက်ပေးလား၊ အပြည့်ပေးလား ဆိုတာရောသေချာမေးပါနော်။ နယ်ဆိုရင်သိပ်စျေးမကြီးပေမယ့် Tokyo မှာဆို စျေးတော်တော်များပါတယ်။
ဖြိုး အကြံပေးချင်တာတွေက ဂျပန်လာချင်လို့ ဘာအရင်စလုပ်ရမှန်းမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ Japan စာကို အရင်တက်ပါလို့။ ဂျပန်စာတတ်ပြီးမှ အလုပ်ရှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ စစချင်း agency အပ်မယ်ဆိုလည်း ဂျပန်စာမတတ်ဘဲ agency.ကချက်ချင်းမပို့ပေးပါဘူးနော်။ ဂျပန်စာတက်မှပို့ပေးမှာပါနော်။
ကိုယ်အပ်ထားတဲ့agencyက အမှန်အကန်ဆိုတော်သေးပါတယ်။ အကယ်လို့ လိမ်တာဖြစ်နေရင် ကိုယ်ပဲဒုက္ခ ရောက်မှာပါ။
ဂျပန်စာတက်ပြီး မလာရသေးလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့သူတွေအတွက် စိတ်မညစ်ပါနဲ့လို့ စိတ်ဓာတ်မကျကြပါနဲ့လို့။ အခုနောက်ပိုင်း company တွေကပေါလာတော့မှာမို့လို့ သေချာ ရွေးချယ်ပြီးမှ လာစေချင်ပါတယ်။